2010/2012/2015 Election » ခြံစည်းရိုးပေါ်က ပညာရှင်များ အပြစ်ရှာရန် ကုန်ကြမ်းများး – NLD ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်း	22
မမြင်ပဲ နေမယ်။ ဟေးဟေးဟေးးး
ပြည်သူလူထု၏ ဘဝများ ပြောင်းလဲလာစေရန် ……………………………………………….
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး …………………………………..
မြို့ပြ ဖွံ့ဖြိုးရေး ……………..
ဂျက်စပဲရိုး says: ဘွားတော်ကြီး နိုင်ပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။
ခု လူတွေ မရှိတော့ ပြီးတာပဲ ဆိုတဲ့ အစတုံးနေတဲ့ မေတ္တာ တွေနဲ့ :P
မြစပဲရိုး says: လက်ညောင်းခံ ပြီး မစိမ်းပေးတာကြာလှပြီ။
. ဖြစ်လွန်း လို့ပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဒါနဲ့ မီးခိုးငွေ့ တွေ ထဲ က ကလေး နှစ်ယောက် ဇီဇီ နဲ့ ဂျက် & (ကျန်သော ကလေးများ) ဂရုစိုက်ကြဦး။
ဂျက်စပဲရိုး says: မနေ့က မိုး ဆော် ထားတော့ ညနေနဲ့ ခု မနက် အတော် အသက် ရှူလို့ ကောင်းသွားပါပြီ အရီး ရေ
kai says: တကယ်တော့.. အဲဒီအဘတွေတော်တော်များများကလည်း.. နိုင်ငံရေးမလုပ်ချင်တော့ပါဘူး..။
… လုပ်ခဲ့ရတာ.. မောပြီလေ..။ အသက်တွေလည်းကြီးပြီ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: တကယ် တအုပ်လုံးများအပြီး သွားရင် ခရီးစရိတ် ရှာပေးအူးမှာပါ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: https://www.facebook.com/usembassy.rangoon/posts/897081230373697
kai says: U.S. Embassy Rangoon added2new photos.
kai says: ကြည့်ရတာ… နောက်တခါ စမတ်ဆန်ရှင်လာရင်.. အဲဒီမဘသက အစွန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့တွေကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်…။
No Fly List ထဲထည့်လိုက်ရင်တော့ ..ပွဲပြတ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: မြန်မာပြည်က IS တွေ ကို ဒီ လို ထိမ်းလို့ရမယ်ထင်လို့လားမသိ
kai says: သေချာတော့မသိပါဘူး..။
အစွန်းတွေကို..ဖြတ်ဖို့က.. ငွေပင်ငွေရင်းကို.. ဖြတ်ရတယ်ဆိုကြတာပဲ..။ ငွေမရှိပဲ… အဲ..အဲ.. ၀တ္တု(၀ိနည်းလွတ်ငွေ့နာမည်ဝှက်) မရှိပဲ.. ဘာလုပ်လို့ရတယ်.. လိုက်လို့..။
ငွေကြေးနဲ့မာစတာယူထားတဲ့.. ခေတ်ပညာတတ်ဆိုသူတွေ.. သေသင့်တယ်..။ လို့..။ IS တွေကတော့… သူရို့မြေကြီးကရေနံထုတ်… ယူအက်စ်လက်နက်တွေ မှောင်ခိုဝယ်..။ တချို့.. ရုရှားလက်နက်တွေဝယ်..။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲဒီ သင်္ကန်းခြုံတွေ နောက်က စပွန်စာဟာ သဌေးမ တွေ ဆိုရင်
kai says: သိပ်သိ..။ ထေရာဝါဒရဲ့အကြီးဆုံးဒုက္ခက.. အဲဒီမိန်းမတွေပဲ…။
မြစပဲရိုး says: ဇီကလေးရေ
kai says: ဒီချုပ်က…အာဏာအဓိကနေရာယူနိုင်ရင်.. သေသေချာချာညှိလုပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်…။
သူတို့တွေမပါပဲနဲ့တော့.. တိုင်းရင်းသားတပ်တွေနဲ့.. အစိုးရ..ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်တွေချုပ်နေတာ.. ရီစရာလို့သာ… ထင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: အစွန်းတွေက ပညာတတ်နည်းတယ် အရီးရဲ့။
မြစပဲရိုး says: ဘယ်သူတွေ ရေးထားလဲတော့ မသိဘူး။
ဒီလို အရေးကြီး ကိစ္စအရေးကိုတောင် မှန်အောင် မလုပ်နိုင်တဲ့ အစိုးရ ကိုတော့ အပြစ်မမြင်။ ဘာမှ မဝေဖန် ကြဘဲ ဘာမှ မစ နိုင်သေးတဲ့ အတိုက်အခံ ကိုတော့ cat cat လန် ဘဲ။ (cd – cat cat ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: free and fair election ဖြစ်ရန် ရွေးကော်၊ အစိုးရ၊ မီဒီယာ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီးရှိသည်။
မှားလျှင် ငေါက်တော် မမူပဲ ပြင်ပေးတော်မူကြပါ။ ~~~
မြစပဲရိုး says: ဟို ပေါက်တတ်ကရ Myanmar Express က NLD ကို မဲပေးမယ် လို့ တရားဝင်ကြေငြာနေတဲ့ အနုပညာရှင် တွေ ကို အပြစ်တင်နေတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အမှန်တော့ အဲဒီ ပေ့(ချ) တို့ ဟို ထောက်ပြုတ်ဖဘတို့က အရေးမပါတော့ပါဘူးး
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခေးရယ်။